Wararkii ugu dambeeyey ee Tukaraq iyo xiisad colaad oo maanta ka taagan - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee Tukaraq iyo xiisad colaad oo maanta ka taagan
Wararkii ugu dambeeyey ee Tukaraq iyo xiisad colaad oo maanta ka taagan
Tukeraq (Caasimadda Online) – Wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa saakay sheegaya in degaankaasi ay ka jirto xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada labada dhinac oo ku hubeysan boqolaal gadiidka dagaalka ah wali isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay, waxaana jirta cabsi laga qabo dagaal mar kale ka dhici kara deegaanka.
Ciidamo badan oo kala yimid Soomaaliland iyo Puntland ayaa saacadihii ugu dambeeyay la geeyay degaanka Tukaraq ee gobalka Sool.
Shacabka ku nool degaaanka Tukaraq ayaa cabsi badan ka muujiyay xiisadan dagaal ee saakay ka taagan degaankaasi, iyagoona qaarkood bilaabay in ay ka sii barakacaan degaanka Tukaraq ee gobalka Sool.
Waxaa jiray Dadaalo la doonayay in lagu xaliyo xiisada dagaal ee ka dhax aloosan Puntland iyo Soomaaliland balse marar badan fashilmay.
Waxaana labada dhinac dagaalka soo cusboonaaday degaanka tukaraq mid waliba ku eedeeyay dhinaca kasoo horjeeda.
Madaxda Puntland iyo Soomaaliland ayaa dhowr jeer waxaa ay warbaahinta isku mariyeen hadalo xanaf ah, taasi oo sii abuuri karta in dhibaato hor leh ay ka dhacaan Degaanada ka tirsan gobalka Sool.